Qarax Ka Dhacay Xaafada Towfiiq Ee Degmada Yaaqshiid. – Bogga Calamada.com
Qarax Ka Dhacay Xaafada Towfiiq Ee Degmada Yaaqshiid.
Weerar loo adeegsaday Bamka noocyada gacanta laga tuura ayaa lagu weeraray xarunta Laanta Towfiiq ee degamda Yaaqshiid,iyadoona dhawaaqa qaraxa Bamka si aad ah looga maqlay inta badan xaafada Towfiiq.
Xilliga Bamka waxaa gudaha xarunta Laanta Towfiiq ku sugnaay saraakiil iyo maleeshiyaat ka tirsan dowlada Ridada,waxeyna wararka laga helayo gudaha xarunta ay sheegayaan in qaraxa uu sababay khasaara soo gaartay saraakiishii iyo maleeshiyaatkii ku sugnaay gudaha xaruntaasi.
Weerarkan Bamka ah ayaa kusoo aadaya xilli saacadihii lasoo dhaafay qarax lagu dilay sarkaal laguna dhaawacay saraakiil kale oo ka wada tirsan dowlada Ridada uu ka dhacay agagaarka isgoyska Tarbuunka degmada Hodan ee magaalada Muqdisho.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxey gudaha magaaladan Muqdisho ka fuliyeen weeraro kala duwan oo lagu dilay saraakiil iyo askar fara badan oo ka tirsan maamulka Farmaajo.